महरालाई नपक्रन दबाब ! spacekhabar
महरालाई नपक्रन दबाब !
स्पेसखबर काठमाडाैं, १८ असाेज
निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? प्रहरी दुविधाग्रस्त देखिएको छ। ‘लिखित उजुरी नआई कसरी समात्ने? ’, उच्च स्रोत भन्छ, ‘भोलि अदालतमा जाहेरवाला खोइ भनेर खोजी हुन्छ। प्रहरी प्रतिवेदनले मुद्दा चलाउने हो भने पनि घटना वारदातमा प्रहरी थिएन। त्यसैले कानुनी कारबाहीको बाटो साँघुरिएको हो।’
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना–प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा भने प्रहरीलाई कुनै खालको दबाब नदिएको बताउँछन्। ‘महराविरुद्ध कारबाही चलाउन प्रहरीलाई कसले रोक्यो? ’, सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा भन्छन्, ‘सरकारबाट कुनै दबाब छैन। प्रहरीको आफ्नै अधिकार छ। नियम, कानुनअनुसार कारबाही गर्न बाटो खुला छ।’
महराले आफूनिकटस्थसँग सभामुख पदबाट राजीनामा दिए पनि सांसद पद नछाड्ने बताउँदै आएका छन्। उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महरालाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नुपरे सोधेर मात्रै अगाडि बढ्न सुरक्षा निकायलाई भनेका छन्। सरकार प्रमुख र सत्ताधारी दलका अध्यक्षबाटै महराविरुद्ध कानुनी चलाउन प्रस्ट निर्देशन नभएपछि प्रहरी दुविधामा परेको उच्च स्रोत बताउँछ। अन्नपूर्ण पाेस्टमा खबर छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज १८, २०७६, ०८:१४:००